Muqdisho: Kooxda Al-Shabaab oo meel fagaare ah ku dishay Rag Soomaali ah | Somaliland.Org
Muqdisho: Kooxda Al-Shabaab oo meel fagaare ah ku dishay Rag Soomaali ah
September 28, 2009	Muqdisho (Somaliland.Org)- Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaallama Deegaano ka mid ah Koonfurta Soomaaliya, ayaa la sheegay in ay meel fagaare ah ku dishay laba Nin oo Soomaali ah oo ay ku eedaysay inay Basaasiin u ahaayeen Hay’adda Sirdoonka ee Maraykanka.
Siday baahisay Wakaaladda Wararka ee AFP, labadan Nin oo Soomaali ah, isla markaana lagu dilay Magaalada Muqdisho, ayaa Kooxda Al-Shabaab ay ku eedaysay inay Basaasiin u ahaayeen Hay’adda Sirdoonka Maraykanka ee C.I.A. “Xasan Macalin Cabdilaahi waxa lagu helay dembi ah in uu u basaasayay Maraykanka.” Sidaa waxa yidhi Cabdilaahi Al-Xaaq oo ah xaakimka Xukunkan ugu dhawaaqay Al-Shabaab. Waxaanu xubinta labaad ee la dilay ku eedeeyay in uu bartilmaameed u ahaa oo uu la socday Ciidamada Dawladda, isla markaana uu warka siinayay C.I.A-da Maraykanka.
Maaha markii u horraysay ee ay Kooxda Al-Shabaab meel fagaare ah ku disho dad Soomaali ah, iyaga oo dembiyo kala duwan ku eedaysay. Hase ahaatee, waxay hore u fuliyeen Xukunno kala duwan oo ay ka mid tahay Gacan iyo Lugo-goyn.